विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने वातावरण सरकारले बनाएको छैन ।
– भेषबहादुर थापा
साढे दुई वर्षअगाडि विद्युतीय बस ल्याउने जमर्को किन गर्नुभयो ?
विश्वभर विद्युतीय सवारीको माहौल तात्दै गएको र पेट्रोल, डिजेलजस्ता खनिज पदार्थ रित्तिँदै गएको अवस्थामा नेपालमा लोडसेडिङको अन्त्य भएकाले हाम्रै देशमा उत्पादन हुने विद्युत्को उपभोग गरेर बस चलाउन पाइने भएकाले हामीले सुन्दर यातायात भनेर कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता गरी नेपालका विभिन्न सहरमा विद्युतीय बस चलाउने उद्देश्यले विद्युतीय बस ल्याएका थियौं । विभिन्न समस्याका बाबजुत हामीले यी बसलाई चक्रपथमा सञ्चालन गरिरहेका छौं । अहिले विद्युतीय बसको माग नेपालका विभिन्न स्थानमा छ । तर, सरकारले विद्युतीय सवारी ल्याउनका लागि आवश्यक सहजीकरण नगरेकाले अहिले हामीले अन्य बस ल्याएका छैनौं ।
अहिलेको अवस्थामा सरकारले कसरी सहजीकरण गर्न आवश्यक छ ?
नेपालमा निजी विद्युतीय कार चलेको खण्डमा मात्रै विद्युतीय गाडी चलेको मान्यता हँुदो रहेछ । अन्य देशमा पब्लिक सवारी विद्युतीय भएको खण्डमा मात्रै विद्युतीय सवारीको माहौल आएको मानिन्छ । त्यसैले होला, नेपालमा अहिलेसम्म पनि सरकारले पूर्ण रुपमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने वातावरण सरकारले बनाएको छैन । सरकारले हामी यातायात कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई एक किसिमको राहत नदिएसम्म हामीले प्रशस्त बस ल्याएर सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन । किनकि अहिले एउटा ३२ सिट क्षमता भएको विद्युतीय बस ल्याउनका लागि लगभग २ करोड पर्छ न कि पेट्रोल वा डिजेलले चढ्ने गाडी ६० लाखजतिमा आउँछ ।
व्यक्तिलाई त डिजेलकै गाडी चलाउँदा फाइदा होला, तर प्रदूषणको कुरा र खेर जाने विद्युत्को कुरा गर्दा विद्युतीय बसका कारण सरकारलाई कालान्तरमा कति फाइदा हुन्छ त ?
सरकारले विद्युतीय बस ल्याउनका लागि केही राहत दिएको खण्डमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्दा वातावरण प्रदूषणको नियन्त्रण हुन्छ भने डिजेल र पेट्रोलको नाममा अरबौं रुपैयाँ विदेश जाँदैन । सरकारले अहिलेसम्म राहतको कुरा मात्रै हैन, आफ्नै कर्मचारी बोक्न पनि विद्युतीय बसको सञ्चालन गरेको छैन । मुख्य सहरमा ठूलाठूला विद्युतीय बस चलाउँदा ट्राफिक जाम पनि हुन पाउँदैन । यो कुरा सरकारले बुझेको छैन वा बुझेर पनि बुझ पचाएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा यति वर्षपछि नेपालमा यो–यो सेगमेन्टमा विद्युतीय सवारीलाई मात्रै प्राथमिकता दिने भनेर लेखेको हुन्छ, कार्यान्वयनको कुरा गर्दा उनीहरूको गाँस लुट्नै आएको व्यवहार गर्छन् । त्यसैले सरकारले आगामी बजेटदेखि नै विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । कति कर्मचारीले त डिजेल गाडी नै उपयुक्त हुन्छ नि हैन भनेर उल्टो प्रश्न गर्छन् । सुरुमा महँगो भए पनि यसको सञ्चालन खर्च निकै कम छ भनेर उहाँहरूले बुझ्ने प्रयास नै गर्नुभएको छैन ।
प्योर स्कुटर निकै स्मुथ लाग्यो
भिडोलको वेस्ट डिलरको अवार्ड पाएको छु
जोमसोममा जिप्रका मुस्ताङले स्वागत गर्नेछ